Mitonon-tena Ho Gadra Politika Ireo Mpikatroka Mafana Fo Paragoaiana, Saingy Lavin’ny Fanjakàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2018 17:26 GMT
Talohan'ny nanagadrana azy, niasa ny any niaraka tamin'ny reniny i Araldo Quintana, ary nofinofiny ny ho lasa mpilalao baolina kitra. Sary avy amin'i Santi Carneri. Nampiasaina rehefa nahazoana alàlana.
Misy toerana iray any Asunción, renivohitr'i Paragoay, izay erana natao ho an'olona 1.300 fara-fahabetsany nefa hipetrahana lehilahy 4.000. Toerana iray izay misy tranokely mando hitazonana ireo lehilahy voampanga ho nanao fanafihana, namaky trano, namono olona ary nivarotra zava-mahadomelina miaraka amin'ireo marary saina sy mpidoroka zava-mahadomelina. Toerana iray izay efa mahazatra ny tsy fahampian-tsakafo, ny rano ary ny herinaratra. Ny fonjan'i Tacumbú io toerana io, izay mbola tsy fantatra ny hahazo ny 80 isan-jaton'ireo voafonja ao satria tsy mbola voatsara na tsy mbola nisy sazy navoakan'ny rafi-pitsaràna fo vaton'i Paragoay. Na izany aza, misy lehilahy folo efa nahazo ny saziny ao anatin'io rindrina io– ny campesinos-n'i Tacumbú. Milaza ny tenany ho gadra politika ireo lehilahy ireo ary voaheloka amin'ny sazy mafy indrindra voasoratra ao amin'ny lalàna paragoaiana, saingy tsy ara-dalàna sy tena mampisalasàla ny fitsaràna sy ireo fiampangàna.
Ankoatra ny sazin-dry zareo henjana , dia toetra maro no ifampizaràn'ireo campesinos (tantsaha) ireo : fakàn-tahaka ny fitondrantenany, tena hajain'ireo mpigadra hafa ry zareo, manampy amin'ny fampianarana ireo gadra mahantra izy rehetra, ary mandray anjara amin'ny asa isan'andro toy ny mahandro, mikarakara sakafo, mandrafitra. Ny tena zava-dehibe, na izany aza, dia manana lasa iombonana ry zareo : tantsaha madinika tany ambanivohitry ny departemantan'i San Pedro ry zareo, tany Canindeyú sy Caaguazú, izay nananganan-dry zareo fikambanana sy nitarihany izany mba hiarovana amin'ny fahazoana tany sy hiasa ho an'ireo vondrom-piarahamonina tantsaha ao amin'ilay firenena ahitàna ny fitsinjaràna tsy ara-drariny ny tany eto amin'izao tontolo izao– Paragoay.
Hatramin'ny nianjeran'ny fitondrana jadon'i Alfredo Stroessner tamin'ny 1989, mpitarika vondrom-piarahamonina 115 no novonoinatao Paragoay ary tsy mbola misy ny voampanga ho nanao ireo vonoan'olona ireo. Tafiditra amin'ny demokrasia ny firenena saingy mbola mitoetra hatrany ny tsy fitovian-dajan'ny fahefana. Nanisy rarivato ny làlan'ny tsy fitoviana amin'izao fotoana izao ireo taona maron'ny nisian'ny fitondrana jadona niaraka tamin'ny politika izay nanome tombony ho an'ny milin'ny fitondràna sy ireo mpiara-dia aminy. Vokatr'izany, mampahonena ny tsy fitoviana eo amin'ireo tantsaha sy tompon'ny tany (voakajy fa 2%-n'ny mponina no manana ny 85%n-n'ny tany )
Ohatra iray malaza ny fandripahana tao Curuguaty tamin'ny fiandohan'ny taona 2012, noho ny ady momba ny zo amin'ny tany tao amin'ny departemantan'i Curuguaty. Nisy fiantraikany maharitra tamin'ny firenena izany tranga izany ary tonga hatramin'ny fampiatoana ny filoha Fernando Lugo mihitsy aza. Mbola sarotra ny mamantatra ny antsipirihiny tamin'ilay tranga ary mitarazoka any amin'ny fitsarana paragoaiana ny raharaha.
Farany, tantsaha 11 sy mpitandro filaminana 6 no nisy namono ary nanjary ohatra nampiavaka ny fomba fizaràna tany tsy mitovy, ary mihanaka manerana ny firenena ny herisetra atao amin'ny tantsaha.
Na izany aza, misy zavatra hafa lasa mibaribary : nahita endrika vaovao famoretana ho ampiharina i Curuguaty. Ireo mpikatroka ho an'ny zo amin'ny tany izay tsy maty novonoina dia matetika nampanginin'ny rafi-pitsaràna mpanao kolikolin'i Paragoay. Teo anelanelan'ny 2013 sy 2015, 460 ny olona nenjehina ary 273 no notànana noho ny fiarovany ny zo amin'ny tany.
Ireo tranga ireo dia miavaka amin'ny tsy firaharahiana ny fitsipika fototry ny fitsaràna mahazatra toy ny fiarovana ny porofo sy fanomezana mpiaro ho an'ny voampanga. Nolavin'ny Parlemanta eoropeana, ny Firenena Mikambana, ny Amnesty International, ny Oxfam ary ireo fikambanana paragoaiana toy ny Filankevitry ny vehivavy indizena sy tantsaha (conamuri) ary ny Fiangonana Katolika ny fitsaràna ireo campesinos-n'ny Tacumbú ireo.
Voatifitra teo amin'ny valanoranony i Néstor Castro nandritra ilay fandripahana tao Curuguaty ary voaheloka higadra 18 taona. Maty nandritra ilay fifampitifirana ny rahalahiny. Sary avy amin'i santi Carneri.
Voaozona hiady ho an'ny rariny
Misy tsy fitoviana kely ary anton'ny fifandirana ny famaritana ny atao hoe gadra politika. Araka ny Filànkevitr'i Eoropa, ny atao hoe gadra politika dia olona gadraina noho ny “antony ara-politika, [ary] ny halavan'ny fe-potoana na ireo fepetra fitazonana dia mazava fa tsy mifanaraka amin'ny hadisoan'ilay olona voaheloka na ahiahiana…”
Araka ny Amnesty International, ny atao hoe gadra noho ny feon'ny fieritreretany dia ireo ” nogadraina nefa tsy nampiasa herisetra na nanohana ny fampiasàna izany … noho ny finoany, ny fokony, ny maha-lahy na maha-vavy, ny loko na ny fiteny.” Fa raha toa ka mampiasa herisetra ireo gadra ireo, dia takian'ilay fikmabanana ny hisian'ny fitsaràna tsy mitanila.
Ao Tacumbú, mampianatra Guarani i Arístides Vera. Natao manontolo tamin'ny teny espaniola ny fitsaràna azy, izay tsy fitenin-dreniny. Sary avy amin'i Santi Carneri.
Lazain'i Óscar Ayala Amarilla, mpisolovava sady sekretera jeneralin'ny Filankevitra Paragoaiàna momba ny zon'olombelona (CODEHUPY), fa mifototra amin'ny fijoroana vavolombelon'ny olona tokana izay nanao fanambarana mifanohitra ny sazin'ireo gadra marobe ireo. ” Voaheloka noho ny fijoroana vavolombelona tokana ry zareo, izay ampaham-porofo tsy ampy raha tsy miampy antontan-taratasy hafa”, hoy izy. ” Mampisalasala izany satria tsy mahatratra ny fenitry ny porofo ilaina hanamelohana olona amin'ny fitsaràna ara-dalàna izany.”
Tamin'ny tranga tao Curuguaty, dia tsy noporofoin'ilay fanenjehana fa hoe avy amin'ny voampanga ilay tifitra nahafaty ireo mpitandro filaminana, na dia nitondra fitaovam-piadiana aza ry zareo. Fanampin'izay, tsy mbola nohadihadiana mihitsy ny fahafatesan'ireo tantsaha maty nandritra ilay fandripahana.
Rubén Villalba, voasazy 35 taona am-ponja noho ilay fandripahana, dia mitàna fa tsy misy porofo hiampangana ny campesinos-n'ny Tacumbú ary manakiana ny tsy fahampian'ny fanadihadiana tamin'ny fahafatesan'ireo tantsaha. ” Izany no politikan'ny fanjakan'olom-bitsy, ireo orinasa maro rantsana iraisam-pirenena. Novonoin-dry zareo izahay.”
Nampangaina ho naka an-keriny sy namono an'i Cecilia Cubas tamin'ny 2006 ny sasany amin'ireo gadra campesinos. Nampisahotaka ny firenena izany tranga izany, satria zanakavavin'ny filoha teo aloha Raúl Cubas i Cubas ary nifamatotra tamin'ilay vondrona mpikomy fantatra amin'ny hoe Tafiky Ny Vahoaka Paragoaiana (EPP amin'ny teny espaniola) ilay fakàna an-keriny. Na izany azy, araka ny filazan'ireo niaina ela tao am-ponja, dia tsy ara-drariny ny fitsaràna azy ireo (campesinos ) ary nisy fifandraisany be tamin'ireo hetsika politikan-dry zareo.
“Tantsaha aho, mpiasa,” hoy i Rubén Villalba. Talohan'ny nigadràny, niaina tamin'ny tierras malhabidas izy, fanànana hiadiana izay tokony hanaovana fanavaozana fananantany. Voasazy 35 taona an-tranomaizina izy tamin'ny raharaha Curuguaty. Sary avy amin'i Santi Carneri, sary nahazoana alàlana.
Manaiky i Óscar Ayala, ilay mpisolovava mpiaro zon'olombelona fa tsy tokony ho sokajiana ho toy ny gadra mahazatra ireo tantsaha nofonjaina. “Miresaka ny momba ireo olona izay nitàna ary mbola mitàna ny andraikitra fototra mifandray amin'ny hetsika fikatrohana eny ambanivohitra sy ny rariny ara-tsosialy izahay, ary io no mampiavaka azy ireo amin'ny gadra hafa.”
Fotoam-pitsaràna roa ihany no tsy natrehan'i Margarita Durán Estragó, mpahay tantara, mpikaroka sady mpikatroka mafana fo, nandritra ny fitsaràna tany Curuguaty ary voarakitra ao anaty kahie kely efa ratsiratsy ny hadisoany. Mino izy fa namoronana porofo ilay fiampangana ary nisy zavatra nafenina mba hanamelohana ireo tantsaha. ” Nampangain-dry zareo ny olom-pirenena tsotra ary tsy nohadihadian-dry zareo ny mpitandro filaminana. Naaton-dry zareo mihitsy aza ireo fandidiana faty.”
Ho an'ireo voafonja ao Tacumbú, mitambatra tsikelikely ireo andro mandalo ao. Mandany ny androny ao amin'ny lalantsaran'ny fonja izy ireo, milalao baolina sy manao ny asa an-terivozona. Satria miandry ny fitsaràna miadam-piasa ry zareo, dia miaina indray ny lasany miaraka amin'ireo mpikatroka mafana fo sy ireo mpanao gazety vahiny izay mitsidika mba hijoro ho vavolombelon'ny tantaran-dry zareo.
Taorian'ny folo taona an-tranomaizina, dia namondrona ny tantarany ireo gadra enina voampanga ho naka an-keriny an'i Cecilia Cubas ka namoaka izany no boky. Ao anatin'izany no namintinan'i Aristídes Vera ny nofinofiny, nofinofy izay nandefa azy any am-ponja tahaka ireo campesinos hafa ao Tacumbú. ” Tantsaha no fiandohako,” hoy ny sorany, ” Ny nofinofim-pahafahako dia ny hahafahan'ny ambanivohitra mahantra manana tany, trano, fahasalamana, fanabeazana ary ny fanànana làlana tsara mba hivoahan'ny vokatra ho any an-tsena. Ny fahalalahana, amiko, dia ny fahafahan'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra miasa sy miaina amim-pahamendrehana. Ho an'izany no nitolomako nandritra ny androm-piainako ary ho an'izany no nampigadra ahy. Gadra politika aho.”